Ukukhangisa – Ubumfihlo kanye Nemigomo – I-Google
I-Google ilusebenzisa kanjani ulwazi kusukela kumasayithi noma izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa amasevisi ethu
Ukukhangisa kugcina i-Google namawebhusayithi amaningi kanye namasevisi owasebenza mahhala. Sisebenza kanzima ukuqiniseka ukuthi izikhangiso ziphephile, zivulekile futhi zihlobene kakhulu. Isibonelo, ngeke ubone izikhangiso eziyizigelekeqe ku-Google futhi sinqamula ama-akhawunti wezinkulungwane zamakhulu wabashicileli nabakhangisi ephula izinqubomgomo zethu – kufaka phakathi izikhangiso eziqukethe izinhlelo ezingayilungele ikhompyutha, izikhangiso zempahla eyinkohliso, noma izikhangiso ezizama ukungasebenzisi kahle ulwazi lwakho lomuntu siqu.
I-Google iwasebenzisa kanjani amakhukhi ekukhangiseni
Amakhukhi asiza ukwenza ukukhangisa kusebenze kakhulu. Ngaphandle kwamakhukhi, kulukhuni kumkhangisi ukuthola izithameli, noma ukwazi ukuthi zingaki izikhangiso ezaboniswa nokuthi kungaki ukuchofoza ezikutholile.
Amawebhusayithi amaningi, njengamasayithi wezindaba namabhulogi, abambisana ne-Google ukubonisa izikhangiso kwizivakashi zawo. Ukusebenzana nozakwethu, singasebenzisa amakhukhi ngezinhloso ezimbalwa, njengokukumisa ukubona isikhangiso esisodwa kaningi, ukuthola nokumisa ukukhwabanisa kokuchofoza, nokubonisa izikhangiso ezingahle zihlobane kakhulu (njengezikhangiso ezisuselwe kumawebhusayithi owavakashele)
Silondoloza irekhodi yezikhangiso esiziphakela kumalogu wethu. Lawa malogu weseva ngokuvamile ahlanganisa isicelo sakho sewebhu, ikheli lasesizindeni se-intanethi, uhlobo lwesiphequluli, ulimi lwesiphequluli, idethi kanye nesikhathi sesicelo sakho kanye nekhukhi eyodwa noma angeziwe angase athole isiphequluli sakho. Silondoloza le datha ngezizathu ezihlukile, esibaluleke kakhulu okungesokuthuthukisa amasevisi wethu futhi silungise ukuphepha kwamasistimu wethu. Siyayifihla le datha yelogu ngokususa ingxenye yekheli lasesizindeni se-intanethi (ngemuva kwezinyanga ezingu-9) nolwazi lwekhukhi (ngemuva kwezinyanga ezingu-18).
Amakhukhi ethu okukhangisa
Ukusiza ozakwethu bethu ukuphatha ukukhangisa namawebhusayithi abo, sinikela ngemikhiqizo eminingi, kufaka phakathi i-AdSense, AdWords, Google Analytics, namasevisi omkhiqizo we-DoubleClick. Uma uvakashela ikhasi noma ubona isikhangiso esisebenzisa owodwa wale mikhiqizo, kumasevisi e-Google noma kwamanye amasayithi nezinhlelo zokusebenza, amakhukhi ahlukile angathunyelwa kusiphequluli sakho.
Lawa angasethwa kusukela kuzizinda ezihlukile ezimbalwa, ezifaka i-google.com, i-doubleclick.net, googlesyndication.com, noma i-googleadservices.com, noma isizinda samasayithi ozakwethu. Eminye imikhiqizo yethu yokukhangisa ivumela ozakwethu ukusebenzisa amanye amasevisi ngokuhlangana nathi (njengesilinganiso sesikhangiso nesevisi yokubika), futhi lawo masevisi angathumela amakhukhi akhona kusiphequluli sakho. Lawa makhukhi azosethwa kusukela kuzizinda zawo.
Bona imininingwane eminingi mayelana nezinhlobo zamakhukhi ezisetshenziswa i-Google nozakwethu nokuthi siwasebenzisa kanjani.
Ungawalawula kanjani amakhukhi wokuthengisa
Ungasebenzisa izilungiselelo zezikhangiso ukuphatha izikhangiso ze-Google ozibonayo futhi ukhethe ukuphuma ekwenzeni ngokwezifiso izikhangiso. Noma uphuma ekwenzeni ngezifiso izikhangiso, ungasabona izikhangiso ezisuselwe ezintweni ezifana nendawo yakho evamile esuselwe ekheli lakho le-IP, uhlobo lwakho lwesiphequluli, namatemu akho osesho.
Futhi ungaphatha amakhukhi ezinkampani asetshenziselwe ukukhangisa ku-inthanethi ngamathuluzi enketho yekhasimende adalwe ngaphansi kwezinhlelo eziziphethe emzweni amaningi, njengase-US ikhasi lezinketho ze-aboutads.info noma e-EU Izinketho zakho ze-inthanethi.
Kokugcina, ungaphatha amakhukhi kwisiphequluli sakho sewebhu.
Obunye ukuchwepheshe obusetshenziswa ekukhangiseni
Amasistimu wokukhangisa we-Google angasebenzisa obunye ubuchwepheshe, kufaka phakathi i-Flash ne-HTML5, ngemisebenzi efana nokuboniswa kwefomethi yesikhangiso esisebenzayo. Futhi singasebenzisa ikheli lasesizindeni se-intanethi, isibonelo, ukukhomba indawo yakho evamile. Futhi singakhetha ukukhangisa okususelwe kulwazi mayelana nekhompyutha yakho noma idivayisi, okufana nohlobo lwedivayisi, uhlobo lwesiphequluli, noma okuphathelene nokuzwa kudivayisi yakho okufana ne-accelerometer.
Imikhiqizo yezikhangiso ze-Google ingahle ithole ulwazi lokuphetha mayelana nendawo yakho kusuka kwimithombo ehlukahlukene. Isibonelo, singahle sisebenzise ikheli le-IP ukubona indawo yakho jikelele; singahle sithole indawo eqondile kusuka kudivayisi yakho yeselula; singahle siphethe indawo yakho kusuka kwimibuzo yakho yokusesha; namawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo zingahle zithumele ulwazi mayelana nendawo yakho kithi. I-Google isebenzisa ulwazi lwendawo kumikhiqizo yethu yezikhangiso ukuthuthukisa ukuhlobana kwezikhangiso ozibonayo, ukukala ukusebenza kwezikhangiso kanye nokubika ngokungaziwa izibalo ezingaziwa kubakhangisi.
Izinkomba zokukhangisa zezinhlelo zokusebenza zeselula
Ukuze unikeze izikhangiso kumasevisi lapho ubuchwepheshe bekhukhi kungenzeka bungatholakali khona (isibonelo, kuzinhlelo zokusebenza zeselula), singasebenzisa ubuchwepheshe obenza imisebenzi efanayo namakhukhi. Kwesinye isikhathi i-Google ihlanganisa isikhombi esisetshenziswe ukukhangisa kuzinhlelo zokusebenza zeselula kuya kukhukhi yokukhangisa kuleyo divayisi ukuze uhlanganise izikhangiso kuzo zonke izinhlelo zokusebenza zedivayisi yakho yeselula nesiphequluli seselula. Lokhu kungenzeka, isibonelo, uma ubona isikhangiso ngaphakathi kohlelo lokusebenza esiqalisa ikhasi lewebhu kusiphequluli sakho seselula. Lokhu futhi kusisiza ukuthi sithuthukise imibiko esiyinika abakhangisi ekusebenzeni kwemikhankaso yabo.
Ukuze uphume ezikhangisweni ezenziwe ngezifiso kuzinhlelo zokusebenza kudivayisi yakho yeselula, landela imiyalo.
Thola izilungiselelo ze-Google kwezinye zalezi zindawo (kuncike ngidivayisi yakho):
Uhlelo lokusebenza oluhlukile olubizwa ngokuthi izinhlelo zokusebenza ze-Google
Kuhlelo lwakho lokusebenza olukhulu izilungiselelo, skrolela phansi bese uthephe i-Google
Vula okuthi phuma kuzikhangiso ezisuselwe kuzintshisekelo
Amadivayisi ane-iOS asebenzisa isikhombi sokukhangisa se-Apple. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinketho zakho zokusebenzisa lesi sikhombi, vakashela uhlelo lokusebenza lezilungiselelo kudivayisi yakho.
Yini enquma izikhangiso ze-Google engizibonayo?
Iningi lezinqumo zenziwa ukuze kunqunywe ukuthi yiziphi izikhangiso ozibonayo.
Kwesinye isikhathi isikhangiso osibonayo sisuselwe endaweni yakho yamanje noma yangaphambilini. Ikheli lakho le-IP ngokuvamile liyisibonelo esihle sendawo yakho enembile. Ngakho-ke ungabona isikhangiso kukhasi lase khaya le-YouTube.com eliphromotha i-movie ezayo ezweni lakini, noma useshe okuthi ‘pizza’ kungabuyisa imiphumela yezindawo ze-pizza edolobheni lakho.
Kwesinye isikhathi isikhangiso osibonayo sisuselwa kokuqukethwe kwekhasi. Uma ubheke ikhasi lamathiphu wengadi, ungahle ubone izikhangiso zezinto zasengadini.
Kwesinye isikhathi ungabona isikhangiso kuwebhu esisuselwe kumsebenzi wakho wohlelo lokusebenza noma umsebenzi kumasevsi we-Google; isikhangiso sohlelo lokusebenza elisuselwe kumsebenzi wewebhu; noma isikhangiso esisuselwe kumsebenzi wakho kwenye idivayisi.
Kwesinye isikhathi isikhangiso osibonayo kukhasi sinikezwa yi-Google kodwa sikhethwa enye inkampani. Isibonelo, kungenzeka ubhalise newebhusayithi yephephandaba. Kusukela kulwazi olunikeze kuphephandaba, kungenza izinqumo ezimayelana nokuthi yiziphi izikhangiso okumele uboniswe zona, futhi kungasebenzisa imikhiqizo enikeza izikhangiso ye-Google ukuze ithumele lezo zikhangiso.
Futhi ungabona izikhangiso kumikhiqizo namasevisi e-Google,kufaka phakathi usesho, Gmail, ne-YouTube, ngokususelwe kulwazi, olufana nekheli lakho le-imeyili olinikezile ukubakhangisi bese abakhangisi babelane ne-Google.
Kungani ngibona izikhangiso ze-Google kumikhiqizo engiyibukile?
Ungabona izikhangiso zemikhiqizo ozibuke ngaphambilini. Asicabange ukuthi uvakashela iwebhusayithi ethengisa izinduku zegalofu, kodwa awuzithengi lezo zinduku ekuvakasheni kwakho kokuqala. Umnikazi wewebhusayithi angafuna ukukugqugquzela ukuthi ubuye uqedele ukuthenga kwakho. I-Google inikeza amasevisi avumela abaqhubi bewebhusayithi ukuthi bakhombe izikhangiso zabo kubantu abavakashele amakhasi wabo.
Ukuze leli khukhi lisebenze, i-Google ifunda ikhukhi elivele likusiphequluli sakho noma ibeka ikhukhi kusiphequluli sakho uma uvakashela isayithi legalofu, (sicabangela ukuthi isiphequluli sakho sivumela ukuthi lokhu kwenzeke).
Uma uvakashela elinye isayithi elisebenza nge-Google, okungenzeka lingahlangani sanhlobo negalofu, ungahle ubone isikhangiso salezo zinduku zegalofu. Yingoba isiphequluli sakho sithumela i-Google ikhukhi elifanayo. Ngokuzayo, singasebenzisa leyo khukhi ukukunikeza ngesikhangiso esingakukhuthaza ukuthi uthenge lezo zinduku zegalofu.
Ukuvakashela kwakho isayithi legalufu kungahle kusetshenziswe yi-Google ukukubonisa izikhangiso ezenziwe ngezifiso uma usesha kamuva amaqembu wegalufu ku-Google.
Sinayo imikhawulo kulolu hlobo lwesikhangiso. Isibonelo, sinqabela abakhangisi ekukhetheni izithameli ngokususelwe kulwazi oluzwelayo, olufana nolwazi lezempilo noma izinkolo zokukholwa.
Funda kabanzi mayelana ne-izikhangiso ze-Google.